१ वर्ष देखि गायब भएका युटुबर भाग्य न्यौपाने कहाँ छन ? – Sidha Post 24
उनले कति बि’रामीलाई भेटेर आफूले सहयोग गरेको र कतिको लागि सहयोग जुटाए । अहिले चर्चित बनेका अशोक दर्जीको अन्तर्वार्ता लिन उनी झापाका विभिन्न स्थानमा पुगेका थिए ।निरन्तर रुपमा सक्रिय भएर समाजका प्रतिभाको खोजी गरिरहेका भाग्य न्युपाने अहिले गु’मनाम छन् । कोइ बि’रामी परे होस् चाहे कोइ खान नपाए होस् उनि सहयोग लिएर पुग्थे ।कतै नया प्रतिभा भेटीए क्यामेरा लिएर पुगी हाल्थे ।तर केहि महिना यता भाग्य कहिँ कतै देखिएका छैनन् ।उनले आफ्नो सामाजिक संजाल्हरुमा कुनै पोस्ट गरेका छैन् । युटुब च्मायानलमा निरन्तर भिडियो पोस्ट गर्दै आएका भाग्य न्यौपानेले आफुले चलाउदै आएका ततातो खबर , भाग्य न्यौपाने युटुब च्यानलमा कुनै भिडियो पोस्ट गरेका छैनन् ।
पुरा भिडियो हेर्न कमेन्टमा Play लेखेर फोटो क्लिक गर्नुहोस्?
धमला पत्नी एलिजाले एस्तो फोटोशुट गरेपछि धमलाको होस उड्यो, हेरौं तस्बिरहरु